P & O Cruises Australia inowedzera kumbomira pakuenda kweSydney neBrisbane
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kurwisa » P & O Cruises Australia inowedzera kumbomira pakuenda kweSydney neBrisbane
Australia Kuputsa Nhau • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Kurwisa • Health News • Hospitality Industry • Nhau Dzakanaka • nhau • vanhu • Kuvakazve • Kutarisirwa • ushanyi • kutakura • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau
Hurumende dzakaburitsa pachena kuti nzira dzekudzivirira nhomba ndiyo kiyi yekumisa kukiya, kurambidzwa kwemuganhu uye, pakupedzisira, kuvhurazve Australia. Uye chikamu chekudzoka kune chaicho nzanga kuri kuona kuti vanopfuura miriyoni imwe veAustralia vanosarudza zororo regungwa gore rega rega vane mukana wekudaro zvekare.
Iyo yekuzvidira kumbomira ichashanda kune cruises yakarongerwa kubva kuBrisbane neSydney.
P&O Cruises Australia yakasimbisawo kuti iri kudzima mwaka wayo wezhizha weMelbourne, iyo yaive isisakwanise kuendesa.
P & O Cruises inotarisira kuzuva iro painogona kugamuchira vashanyi vayo vanodzokera kubhodhi.
P&O Cruises Australia nhasi yawedzera kumbomira kwayo mukushandira kwetsoka dzinobva kuSydney neBrisbane nemumwe mwedzi kusvika pakati paNdira gore rinouya kupa vashanyi chivimbo chakakura pakuronga kwavo zororo reKisimusi neGore Idzva nekuda kwekusava nechokwadi kwakatenderedza kudzoka kwekufamba.
Kumbomira kwekuzvidira kunoshanda kune ngarava dzakarongwa kubva muna 18 Zvita, 2021 kusvika 14 Ndira, 2022 (yeBrisbane) uye 18 Ndira, 2022 (ye Sydney).
P & O Cruises Australia yakasimbisawo kuti iri kudzima mwaka wayo wezhizha weMelbourne, iyo yanga isisakwanise kuendesa nekuda kwekuwedzeredzwa kwazvino.
"Tinoziva kuti izvi zvinoodza moyo vashanyi vedu vanga vachitarisira kufamba neshamwari nemhuri paKisimusi neGore Idzva, zvisinei, taida kupa chiziviso ichi nekukurumidza sezvinobvira kuti vaone kuti vanogona kuronga zvine chokwadi nezvenguva yezororo," P & O Cruises Australia Mutungamiri Sture Myrmell akadaro.
“Ndinoda kutenda zvakare vashanyi vedu nekuvimbika kwavo nerutsigiro. Tinotarisira zuva apo patinogamuchira vaenzi zvakare muchikepe kuzopemberera zviitiko zvakakosha izvi pakarenda yezororo. ”
P & O Cruises Australia munguva pfupi yapfuura yakazivisa chinangwa chayo chekutanga mashandiro epamba nema cruise evhoti zvizere nevashanyi nevashandi.
"Hurumende dzakaburitsa pachena kuti mipimo yekudzivirira majekiseni ndiyo kiyi yekumisa kukiya, kurambidzwa kwemiganhu uye, pakupedzisira, kuvhurazve Australia. Uye chikamu chekudzokera munharaunda yakajairwa ndechekuona kuti vanhu vanopfuura miriyoni imwe vekuAustralia vanosarudza zororo regungwa gore rega rega vane mukana wekudaro zvekare, "vakadaro VaMyrmell.
"Zvinosuruvarisa, hatisati tajekerwa pane zvinodiwa nehurumende pamwe nevakuru vehutano hwevanhu kudzoka kwechikepe zvishoma nezvishoma asi isu tinotarisira kuti nhaurirano idzi dzichawanda izvozvi sezvo paine kuvandudzika kukuru munharaunda."
Vashanyi vane mabhuku avo akanganiswa vanozoziviswa nezve kumbomira uye sarudzo dzinowanikwa zvakananga kana kuburikidza neakagamuchirwa vafambi.